Ebe kọntinent | Netwọk Mgbasa Ozi
Ogige del Duero Natural Park (Salamanca)
El Ọnọdụ ihu igwe ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali. N'ihi gịnị? N'ụzọ bụ isi, n'ihi na oge anọ dị iche iche nke ọma na oge ọ bụla: n'oge opupu ihe ubi osisi jupụtara na ifuru, n'oge ọkọchị ọ na-ekpo ọkụ, n'oge mgbụsị akwụkwọ akwụkwọ osisi na-agbanwe agba, na n'oge oyi, a na-ekpuchi ihu igwe na snow.
Enweghi otutu osisi na anumanu dika onodu ebe okpomoku, ma site na otutu mmiri ozuzo, oke ohia na ala ndi ozo di. ebe dị ịtụnanya, ndụ juru n'ọnụ.
1 Ebee ka ọ dị ma kedu ka esi mara ya?
2.1 Ọnọdụ ihu igwe dị na kọntinent
2.2 Ọnọdụ ihu igwe nke Manchurian
2.3 Ihu igwe kọntinent ọnọdụ ihu igwe
2.4 Igwe mmiri na-ekpo oke ala
Ebee ka ọ dị ma kedu ka esi mara ya?
Climografi nke Zaragoza (Spain). Na mpaghara a, ihu igwe bụ mpaghara dị na mpaghara Mediterenian, na-enwe oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ ọkọchị ma na-ajụ oyi ma na-ajụ oyi.
Typedị ihu igwe a bụ ihe ogide nke kachasi elu na Northern Hemisphere, nke pụtara na etiti na ọwụwa anyanwụ Europe, etiti Eshia, ime obodo China, Iran, ime obodo US, Canada. Na Southern Hemisphere nwekwara, dị ka ụfọdụ mpaghara ugwu nke Africa na n'ime ime obodo nke Argentina.
A na-ahụ ebe ikuku mpaghara dị na etiti latitude na maka inwe ihe mgbochi ugwu nke na-egbochi mmetụta nke oke osimiri ma ọ bụ ikuku oyi site na okporo osisi nke nwere ike ibute oke okpomọkụ.
Maka oge a, a na -iche ha nke ọma, dịka anyị kwuru na mbụ. Mana ka anyi lee ya anya nke oma.
Oge nke a na-ahụkarị ihu igwe kọntinent (data izugbe)
Primavera: ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 5 na 15ºC. Mbubata oyi nwere ike ime, mana mercury dị na temometa amalitela. N’aka nke ọzọ, mmiri ozuzo n’oge a na-adịkarị ụkọ karịa n’oge ezumike n’afọ; n'agbanyeghị nke ahụ, ha nwere ike ịda ma ọ dịkarịa ala 40mm / ọnwa.
N'oge okpomọkụ: ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 15 na 30 ma ọ bụ 32ºC kachasị. Mmiri ozuzo na-ada obi ụtọ n'oge oge niile, na ọnụego nke 50-100mm / ọnwa.
Nda: Mercury na temometa na-amalite ịda, karịa ma ọ bụ obere na 20 maximumC na opekempe nke 10 ,C, igwe ojii amalitekwa ịbụ ndị na-akwado oge ahụ, nke bụ nke abụọ na-ezo mmiri n'afọ. Ha dara n’agbata 70 na 90mm / ọnwa. Kwupụta na njedebe nke Septemba, frosts izizi na-eme.
Oge oyi: n'ime ọnwa atọ ndị a, ntu oyi na snowfalls na-eso ibe ha. Ọnọdụ okpomọkụ bụ 10ºC kachasị elu na ala -10ºC ma ọ bụ karịa.
Anyị ahụla okpomọkụ na mmiri ozuzo nke nwere ike ime na ihu igwe kọntinent, mana ịmatakwu, kedu ụzọ ka mma karịa ịmara ụdị dị iche iche dị, ebe ọ dabere na ọnọdụ ala, enwere ike inwe ụfọdụ ọdịiche. N'ihi ya, a maara ọtụtụ ụdị ihu igwe dị iche iche, gụnyere:
Ọnọdụ ihu igwe dị na kọntinent
Ọ bụ nke na-eme n’ime ime obodo mmiri ahụ dị na mpaghara Iberia, n’ebe ugwu Italytali, ime Gris, Saharan Atlas, na ndị ọzọ. Ihe e ji mara ya nwere oge ọkọchị na-ekpo ọkụ nke nwere ntakịrị mmiri ozuzo, na udu mmiri oyi na frosts.
Ọnọdụ ihu igwe nke Manchurian
Typedị ihu igwe a bụ nke na-eme na North Korea, ugwu China, na ụfọdụ obodo Russia, dịka Khabarovsk. Nwere a nkezi kwa afọ okpomọkụ karịa 0ºC ma n'okpuru 10ºC. Mmiri ozuzo a na-enwe kwa afọ karịrị 500mm.
Ihu igwe kọntinent ọnọdụ ihu igwe
Ọ na - eme n'ọtụtụ mpaghara ọwụwa anyanwụ na etiti Europe na ndịda ọwụwa anyanwụ Canada. O yiri nke gara aga, ma obere oyi na drier.
Igwe mmiri na-ekpo oke ala
Typedị ihu igwe a dị na Central Asia, Mongolia, n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-ekpo ezigbo ọkụ n’oge ọkọchị, na-ajụkwa oyi n’oge oyi, inwe ike iwepụta ụfọdụ ntu oyi.
N'ụdị ihu igwe a bụ ebe anyị nwere ike ịhụ oke ohia. Osisi ndị dị ka maple ma ọ bụ nnukwu osisi, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke conifers (pine, firs, larches, cypresses), na-ebi n'etiti etiti ụwa. Ndụ adịghịrị ha mfe: ọ bụrụ na mmiri ozuzo baa ụba ma ọnọdụ okpomọkụ adịghị oke, ha na-eto dịka ha nwere ike; N'aka nke ozo, mgbe oyi batara, ha aghaghi ichekwa ume iji nwee ike idi ndu n'oge oyi, na akwusi inye ha akwukwo ha ma oghachi ito eto. Ọnọdụ okpomọkụ na-adịgasị iche iche site n'oge ruo n'oge, ma n'ihi mgbanwe ha nwere, ha jisiri ike ruo ụbọchị anyị.
Anmụ anụmanụ enweghịkwa ya mfe, ọkachasị n’oge oyi. N'ezie, enwere ọtụtụ nnụnụ na-akwaga na latitude na-ekpo ọkụ, si otú a na-apụ site na oyi na ntu oyi. Ndị na-anọ dị ka anụ ọhịa bea, ha na-abanye n'ọgba iji hibernate. Anumanu ndi ozo, dika nkita ohia, nkita ohia, akwa ahihia, ele ma obu ihe eji acho acho, na acho ebe a ga-echebe dika oke oyi.
Nri dị ezigbo ụkọ n’oge oyi, ebe ụmụ anụmanụ ole na ole na-anwa ịpụ, a chịkọtala ọtụtụ mkpụrụ osisi. Ọ dabara nke ọma, nke a anaghị adịru mgbe ebighị ebi, na n'oge opupu ihe ubi oke ohia na adi ndu ozo.
Imaara njirimara nke igwe ihu igwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ọnọdụ ihu igwe